Ithonya liphathelene nokuguqulwa, hhayi ukufinyelela | Martech Zone
Ithonya limayelana nokuguqulwa, hhayi ukufinyelela
UMsombuluko, May 12, 2014 UMsombuluko, May 12, 2014 Douglas Karr
Kwaphinda futhi. Bengisemcimbini lapho bekukhuluma khona umuntu onamandla kakhulu onolwazi lokuthuthukisa imicimbi yezemidlalo yamazwe omhlaba. Ubekhuluma ngenselelo imboni ebinayo ekuheheni new abalandeli embonini ethile yokujaha. Wabe esethi igama ... ithonya.
Ithonya - amandla okuba nomthelela kumlingiswa, ekuthuthukisweni, noma ekuziphatheni komuntu noma okuthile, noma umphumela uqobo.
Ithimba lakhe belihlola ukusetshenziswa kwe- ukushaya ama-algorithm ukukhomba abathonya. Bazocela usizo lwalaba bagqugquzeli ukuzama ukuheha izethameli ezintsha kanye nenani labantu kulo mcimbi. Lolu uhlobo lwenkulumo olungishayelayo lwamantongomane. Ukuthi abantu abasembonini yezentengiso basakholelwa ukuthi iqhinga nje ukukhokhela abanye abantu abanokufinyelela okukhulu ukukhuthaza imikhiqizo yabo noma izinsizakalo kungishayela amantongomane. Ithonya limayelana namandla oku ube nomphumela, hhayi nje ukufinyelela.
Akekho kulokhu okuthiwa ithonya lokulinganisa ama-algorithm ngaphandle lapho kunikeza isilinganiso esinembile samandla omuntu wokuthonya isinqumo sokuthenga. Konke kusekelwe kwinani labalandeli, abalandeli kanye nekhono lokufinyelela abantu ngqo noma ngama-retweets nangamasheya. Finyelela, finyelela, finyelela.
Lokhu kuhlala kuyinkinga ngamasu wendabuko wokumaketha. Banokufinyelela okukhulu, ngakho-ke umthelela othile uzolinganiswa. Kepha abasoze baphumelela ekutholeni iqiniso ithonya badinga ngempela. Ngibona imikhiqizo nezinsizakalo zicindezelwa ngaso sonke isikhathi ngokubizwa kanjalo abathonya embonini yethu… futhi izikhathi eziningi ngabelana ngalolo lwazi nenethiwekhi yami. Kepha akuvamile ukuthi ngenze ukuthenga okususelwa kumuntu onephuzu elinamandla amakhulu.
Kuyakhathaza ngoba imboni yalo mholi isivele inethonya elikhulu kunanini ngaphambili - inabo izigidi zabalandeli emazweni angaphandle angena futhi ahlangabezane nomcimbi wawo. Laba bantu bachitha imali eshisiwe bahlala izinsuku ezimbalwa, bejabulela umculo, ukudla, imicimbi yangaphambi nangemuva komjaho ezungeze umbukwane womjaho odume kakhulu emhlabeni.
Ukucaca - angiphikisani nokusebenzisa lokhu okuthiwa abathonya. Kepha zisebenzisele inani eliletha ngempela… zisebenzisele zona phatha umyalezo, hhayi uku yakha. Uma ufuna ukuthonya abantu ngokweqiniso, kufanele yabelana ngezindaba ukuthi abantu bangabandakanyeka ngokomzwelo ekushayeleni isinqumo sokwenza ukuthenga. Ngikhombise indaba yomuntu olingana nami, iholo lami, nezintshisekelo zami ezinokuhlangenwe nakho okuhle kumcimbi wakho.
Ngezigidi zabalandeli, kunezigidi zezindaba eziphoqelelayo kuwo wonke ama-demographic and interest. Zivele zingangeni kuzo! Nika amandla izethameli zakho ukudala nokwabelana ngezithombe namavidiyo, zivumele ukuthi zithole futhi zilandelane, zinikeze izinhlelo zokusebenza zeselula zokutholwa nokwabelana komphakathi.
Vumela izithameli zakho ukuthi zenze futhi zabelane ngezindaba zazo - bese zabelana ngezinhle zazo ngalezi ziteshi ngokufinyelela okubanzi. Qhathanisa izindaba nezethameli ngemiphumela enomthelela omkhulu.
Tags: ithonyafinyelelaezemidlalo zokuzijabulisaimidiya yendabuko
Ukulandelela i-ROI Yokumaketha Okuqukethwe kwamaDummies